The Irrawaddy's Blog: လက်ပံတောင်းကြေးနီစီမံကိန်းအကြောင်း ရှင်းလင်းပွဲလုပ်မယ်
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီတူးဖော်ရေးစီမံကိန်းကို စုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့ကော်မတီရဲ့ အစီရင်ခံစာပါ အချက်အလက်များနဲ့ ပတ်သက်လို့ တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှု မရှိတဲ့အတွက် ဆိုပြီး လက်ပံတောင်း ဒေသခံတွေနဲ့ ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ကော်မတီက သောကြာနေ့ ရန်ကုန်မှာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ လုပ်ပါမယ်။
အချိန် - ဇူလိုင် ၁၈ သောကြာ နေ့ ၂းဝဝ မှ ၄းဝဝ အထိ
နေရာ - အသောက ဓမ္မာရုံ၊ သမိုင်းမြို့မပရိယတ္တစာသင်တိုက်၊ အမှတ် ၂ ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်
ဧရာဝတီသတင်းထောက် ဂျေပိုင် ရိုက်ကူးထားတဲ့ လက်ပံတောင်းဒေသ ကြေးနီတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းခွင် ဓာတ်ပုံများ နဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲဖိတ်စာကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
မေ၂၃ရက်နေ့က တွေ့ရသည့် စံပယ်တောင်ကြေးနီလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခု
စံပယ်တောင်ရှိကြေးနီလုပ်ငန်းတွင်မှ ရာနှုန်းပြည့်နီးပါးသန့်စင်သည့် ကြေးနီပြားများ
မေ ၂၃ရက်နေ့က သတင်းထောက်တွေနဲ့ တွေ့နေတဲ့ မြန်မာဝမ်ပေါင်မုိုင်းနင်းကော့ပါးလီမီတက် ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဂန်းရီကုို
မုံရွာဆားလင်းကြီးမြို့နယ်ရှိ မြန်မာဝမ်ပေါင်မုိုင်းနင်းကော့ပါးလီမီတက် ဆိုင်းဘုတ်
Posted in: Announcement , blogger Lay Wah , ဓာတ်ပုံ , ထွေထွေရာရာ , ကြေညာချက်
ဒေါ်စု က လွှတ်တော်ထဲရောက်ရင် မျက်လုံးလေး ကလည်ကလည်နဲ. ဟိုလူပြောတာနားထောင် ဒီလူပြောတာလိုက်ကြည်.လုပ်နေပြီး ၊ လွှတ်တော်အပြင်ရောက်ပြိဆိုတာနဲ. တခါတည်းနီးစပ်ရာလူတွေခေါ်ပြီး ပြောတော. ဟောတော.တာဘဲ ၊ အဲဒါဘယ်လိုဖြစ်
ဒေါ်စု အဲဒါဘယ်လိုဖြစ်တာလည်း ပြောပိုင်ခွင်. အဆိုတင်ပိုင်ခွင်. မေးပိုင်ခွင်. ပေးထားတာကို ဘာမှမလုပ်ဘဲ ငုတ်တုတ်ထိုင်နေပြီးတော. ၊ လမ်းမပေါ်ရောက်မှ ပြည်သူလူထုကို မြှောက်ပင်.သွေးထိုးလှုပ်ဆော်နေတာတွေဟာ ၊ ဘာရည်၇ွယ်ချက်ရှိနေတာလည်း ။
ဒေါ်စု ကိုယ်တိုင် လွှတ်တော်ကို အယုံအကြည်မရှိရင် ၊ အချိန်ကုန်ခံပြီးလွှတ်တော်တက်မနေဘဲ ၊ ကိုယ်.အိမ်ရှေ. ကိုယ် ရွှက်ဖျင်တဲထိုးပြီး ပြောချင်တာတွေ တနေကုန်ထိုင်ပြော ထိုင်ဟောနေတာ ပိုကောင်းပါတယ် ။
ဒေါ်စုကိုအရင်ကလေးစား အားကျခဲ့ပါသည် သို့သော်ယခုအချိန်ကာလတွင် အယုံအကြည်မရှိတော့တာတော့အမှန်ပဲ။